होटल3* Longuinhos बीच Resort - यो शान्त र शान्तिपूर्ण रिसोर्ट, गोवा को सम्पूर्ण दक्षिण तट मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट को एक निकट स्थित छ।
रिसोर्टमा श्रेणी3* Longuinhos बीच रिसोर्टमा तपाईं स्वतन्त्रित र अविश्वसनीय सहज बसाइ को माहौल मा प्रवेश गर्न मद्दत गर्नेछ। तल एउटा सुन्दर समुद्र तट, सफा र राम्रो कायम स्विमिंग पूल, एक नृत्य तल्ला र अन्य धेरै रोचक र उपयोगी सेवाहरू छन्।
होटल श्रेणी3* Longuinhos बीच Resort पनि सबैभन्दा समझदार यात्री को आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् कि यसको आरामदायक र सहज कोठा को दावा। तपाईं धेरै सुविधाहरु, आधुनिक उपकरण, साथै एक सुंदर दृश्य, एक चोकमा र एक स्विमिंग पूल पाउनुहुनेछ।
विशाल चासो पनि छ भारतीय भोजन स्वाद र दिलकश मसला को एक किसिम संग। होटल3* Longuinhos बीच Resort सबैभन्दा स्वादिष्ट स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय भोजन गर्दछ जो आफ्नो रेस्टुरेन्ट, छ। तपाईं पनि जहाँ मेनु भारतीय र आयात पेय धेरै छ रेष्टुरेन्ट, साथै मूल ककटेल भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गरिनेछ।
होटल Longuinhos Beach Resort3* गोवा को सम्पूर्ण मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट को एक मा स्थित छ - Colva। साथै, बस 10 मिनेट बाटोमा गरेर, तपाईं एक विशाल सपिङ्ग सेन्टर, जहाँ एक उचित मूल्य उत्पादनहरूमा को एक किसिम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हुनेछ। त्यहाँ मडगाव रेलवे स्टेशन, तपाईं चाँडै अन्य शहर प्राप्त गर्न र आफ्नो ठाँउहरु थाह सक्षम हुनेछ जहाँ हो र। Dabolim हवाई अड्डा देखि आधा घण्टा ड्राइभ र 45 मिनेट ड्राइभिङ मा लन्डन + को शहर तपाईं ल्याउँछ।
मा अतिथि समायोजित गर्न गोवा होटल Longuinhos Beach Resort3* प्रदान गर्दछ निम्न समूह विभाजित गर्न सकिन्छ कि 50 कोठा:
अपार्टमेन्ट श्रेणी "मानक" सबैभन्दा धेरै। तिनीहरूले एकदम भद्र भित्री र संकुचित आयाम विशेषता गर्न सकिन्छ। यो सिर्फ एक बाथरूम संग कोठा छ।
अतिथिहरूको मा कोठा "सुइट" बसोबास गर्न आमन्त्रित गरिन्छ। जीवित कोठा - यहाँ तपाईं को लागि एक जो एक बेडरूम छ दुई आरामदायक कोठा, र दोस्रो संग सुसज्जित छन्।
यस होटल मा सबै भन्दा राम्रो अपार्टमेन्ट एक कोठा श्रेणी "डिलक्स" छलफल गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले मात्र होइन एक विशाल ठाउँ मा फरक, तर पनि परिष्कृत भित्री, काठ फर्नीचर र परम्परागत राष्ट्रिय सजावट प्रभुत्व छ जो।
होटल अपार्टमेन्ट मा सुविधाहरु
आफ्नो निपटान मा Resort होटल Longuinhos Beach Resort3* (भारत, Colva) मा सबै अपार्टमेन्ट निम्न सुविधाहरु हो:
प्रत्येक कोठा मा एक बालकनी, जो देखि, आफ्नो कोठा छोडेर बिना, तपाईं हरियो ट्रपिकल उद्यान वा समुद्र सर्फ पराउँछु र केही ताजा हावा प्राप्त गर्न सक्छन् छ;
आधुनिक ठूलो टिभी: तपाईं धेरै उपग्रह च्यानल, र हटाउन सकिने मिडिया बाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ;
आफ्नो कोठा मा एक आरामदायक जलवायु सुनिश्चित लागि पूरा व्यक्तिगत नियन्त्रण वातानुकूलन;
दिन र रात को लागि कारण स्वागत, साथै कोठा अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यक्ष कल पूरा गर्न एक टेलिफोन छ;
अपार्टमेंट आसन्न बाथरूम मा, वहाँ एक शवर, hairdryer र स्नान र सौन्दर्य सामान पूर्ण सेट छ।
होटल Longuinhos Beach Resort3* (Colva) निम्न पूर्वाधार अतिथि लागि डिजाइन गरिएको छ:
होटल जहाँ तपाईं विदेशी बिरुवाहरु र फूल पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ, साथै ट्रपिकल चरा को chirping सुन्न एक विशाल हरियो बगैचा छ;
ठूलो र सफा स्विमिंग पूल दौर तातो भारतीय जलवायु धन्यवाद सबै वर्ष खुला;
सबै भन्दा राम्रो आनन्द भारतीय खाना यस होटल मा कार्य जो रेष्टुरेन्ट, मा;
पनि खेल मिलान हेर्दै होस्ट जो आरामदायक पल्ट, मा पेय र ट्रपिकल ककटेल ताजा;
ननस्टप स्वागत, आफ्नो प्रश्न र समस्या उत्पन्न संग त, तपाईं होटल कर्मचारी पूर्ण कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ;
लबी मा एक मुद्रा-विनिमय कार्यालय छ (आयोग शुल्क चार्ज);
तपाईं क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, सबै हालतमा भ्रमण डेस्क फाइदा लिन;
आफ्नो सामान तपाईं यसलाई आफ्नो घर को स्थान कब्जा गरेनन् भनेर, भण्डारण कोठामा मा लाग्न सक्छ;
तपाईं दाग वा तरिकामा चोट छ भने आफ्नो लुगा, त्यसपछि यो समस्या तपाईंलाई द्रुत लाँड्री कार्यकर्ता समाधान गर्न मदत गर्नेछ;
होटल banquets र व्यापार घटनाहरू लागि विशेष सुसज्जित छन् धेरै कोठा छ;
को स्वागत मा तपाईं आफ्नो बहुमूल्य वस्तुहरू सुरक्षित मा सञ्चय लाग्न सक्छ;
एउटा सानो दोकान होटल मा तपाईं स्मृति चिन्ह किन्न;
पर्यटक एक वाहन भाडामा मौका छ;
होटल वायरलेस इन्टरनेट छ, तर यसको उपयोग एक अतिरिक्त लागत मा मात्र सम्भव छ।
हामी सकारात्मक पक्ष मा पर्यटकहरु विशेषता छ Longuinhos Beach Resort3होटल * (गोवा), भन्न सकिन्छ। समीक्षा उपयोगी टिप्पणी र जीवन्त छाप भीड:
होटल मन को बाहिर, साथै पर्यटक प्रेम कमाउन र एक उच्च स्थिति सम्मानित गर्न प्रयास देख्न सकिन्छ होटल को कर्मचारी वरिपरि;
क्षेत्र धेरै सफा र हरियो छ: एक दैनिक सफाई सेवा, साथै अपरूपण र पानी बिरुवाहरु को कर्मचारी;
होटल समुद्र तट धेरै नजिक स्थित (उसलाई मिनेट को बस एक जोडी हिंड्न) छ;
कर्मचारीहरु धेरै अनुकूल र पर्यटकहरु भद्र छन् र सबै टिप्पणी, उजुरी र अनुरोध गर्न तत्काल प्रतिक्रिया;
कर्मचारी धेरै ध्यान सफाई निगरानी: लुगा धुने मात्र होइन फर्श, तर पनि पर्खाल;
दैनिक दासी अघिल्लो रिजर्व अझै निकास छैन भने पनि गरिएको, पानी पिउने दुई साना बोतल ल्याए;
होटल गरेको रेस्टुरेन्ट मा तीन पटक एक हप्ता जो प्रत्यक्ष प्रदर्शन दिन संगीतकार र गायक, निम्तो;
साँझ र राती होटल र यसको बगैचा क्षेत्र धेरै सुन्दर उज्यालो छ;
खानेपानी दुई बोतल पर्याप्त छैन भने, त्यसपछि (निःशुल्क) अर्को ल्याउन पहिलो अनुरोध तपाईं।
पर्यटकहरु टिप्पण निम्न अंक विशेष गरी लायक को नकारात्मक टिप्पणी र अवलोकन को:
भित्री कोठा पहिले नै थकित, त्यसैले कम्तिमा कस्मेटिक मरम्मत खर्च गर्न चोट छैन;
को कोठरी मा कुनै हैंगर वा हुक वा समतल, राम्रो त लाग्न trempel;
सबै कोठा, वर्ग बिना दुवै उपस्थिति र उपकरण मा लगभग समान (लागत मा वृद्धि एक समुद्र दृश्यमा मुख्य रूप कारण छ) छन्;
होटल दिन छैन बाहिर समुद्र तट तौलिए;
खाना राख्नु पनि धेरै मसला भाँडा बाहेक, एकदम monotonous;
यस क्याफे पनि रात प्ले धेरै चर्को संगीत छ, त्यसैले कोठा केवल एक भयानक हल्ला छ;
वरपरको क्षेत्र मा सबै धेरै फोहोर र unkempt छन्, र smoggy सबै किनभने स्थानीय ड्राई शाखा र पाम पात दोहन भन्ने तथ्यलाई हरेक बिहान।
क्लब होटल "इन्द्रेणी" (इजेभ्स्क)। विवरण, फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
खार्किव होटल वा बिस्तर वास्तविक पर्यटकहरु
नयाँ Famagusta3* (Ayia नापा, साइप्रस): होटल, सेवा, को विवरण
श्रेष्ठ Iberotel Makadi ओएसिस र परिवार Resort 4: * फोटो, समीक्षा
एंथुरियम फूल कसरी हेरचाह गर्ने?
दिमित्री Brusnikin: जीवनी, गणना दिमित्री Platonovich Shadurski को व्यक्तिगत जीवन
VESUVIUS - ज्वालामुखी वर्तमान वा लोप? कथा फोटो
अमिलो दूध देखि तयार कसरी र के
त्रिकोणको उचाइ कसरी पत्ता लगाउने?
Serpukhov होटल: समीक्षा
कानुनी निकायहरूको वर्गीकरण
VAZ-2106। समीक्षा, मूल्यहरू, फोटो र विनिर्देशों